I-Raw Flibanserin powder (167933-07-5) hplc =98% | Ukusetyenziswa koBesetyhini
/ iimveliso / Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones / Ukusetyenziswa kwabasetyhini / Flibanserin powder
SKU: 167933-07-5. iindidi: Ukusetyenziswa kwabasetyhini, Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram kumyalelo wokukhulula weFlibanserin powder (167933-07-5), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Flibanserin powder ividiyo
I-Raw Flibanserin powder Abalinganiswa basisiseko
I-molecular Formula: C20H21F3N4O
Isisindo somzimba: 390.4
umbala: Powstalline powder
Ukusetyenziswa kwePowder Flibanserin powder
Igama lezorhwebo leFlibanserin liquka u-Ectris noGirosa, kunye negama lalo khowudi lophuhliso eliyi-BIMT-17, igama legama langoku li-Addyi.
I-IDA evumelekileyo i-FDA ye-Flibanserin 100mg nsuku zonke ngexesha lokulala yandisa inani leziganeko ezonelisayo ngokwesini (i-SSEs) ukususela kwisiseko ngokumalunga nesinye isiganeko ngenyanga xa kuthelekiswa ne-placebo. Thatha iFlibanserin ngexesha elinye ngaphandle kokulala ixesha kunokunyusa umngcipheko wexinzelelo lwegazi oluphantsi, ukuphazamiseka (ukulahlekelwa kwengqondo), ukulimala kwengozi kunye nokulala.
Isilumkiso kwi-Raw Flibanserin powder
I-Flibanserin ayilona unyango lwe-HSDD kubasetyhini abaye baphumelela kwimihla yokuphela komntu okanye kumadoda, okanye ukuphucula ukusebenza kwezesondo. Akunakusetyenziswa kubantwana.
I-Flibanserin yayisungulwe ekuqaleni njenge-anti-depressant ngaphambi kokuba iphinde iphinde iphinde iphindwe ngokunyanga kwe-HSDD. Impembelelo yecala yeFlibanserin yinkwenkwezi, isisulu sokubamba isantya senzeke malunga namaxesha amathathu ukuya kwesine ngokuphindaphindiweyo kunye nokulala, uzive ukhathele.
IFlibanserin Raw Powder
I-Raw Flibanserin powder Marketing
Indlela yokuthenga iFlibanserin powder evela kwi-AASraw
I-AASraw inikezela ubumsulwa 98% Flibanserin ipowder eluhlaza kumabhabhi angaphantsi komhlaba okanye abasebenzisi besondlo sezesondo zesini.
I-Flibanserin Raw Powder Recipes:
ikaliwe 4.00 ngaphandle 5